Ezi Ziyi-New Putters eziboniswayo ngoku kwiiGolf
AbaPetters bangamaqela asemagqabini e-golf: Ukongeza kwimiba yobuchwephesha abagqalayo begalufu, abo bafumana iimpawu zengqondo kunye nokuzithemba zidlala indima enkulu ekuphumeleleni. Yingakho abaninzi abadlali begalufu bebathanda ukuzama ukusebenzisa i-putters emitsha neyohlukeneyo. Yaye yintoni entsha kwihlabathi le-golf drivers? Yingakho silapha.
I-Scotty Cameron Khetha i Models 2018
I-Scotty Cameron Khetha i-putters ehlaziywe ngo-2018 iyafumaneka kwi-Titleist ekuqaleni ekuqaleni kuka-Matshi. Umgca uquka imizekelo emithathu:
"Umgca omtsha wokukhetha unomxholo wesisixhenxe oqinisekisiweyo wezohambo kunye namanqaku aphakathi kwamallet. I-New Laguna ijoyina i-Scotty's classic Khetha i-Newport, i-Newport 2 kunye ne-Newport 2.5 yezitayela zendlela, ngeli xesha amagama abuyele kwi-Fastback ne-Squareback amagama abuyela kwi-mid-mallet Ukujikeleza umgca i-heel-shafted mid-mallet Khetha iNewport 3. "
Ukuhlaziywa kubandakanya ukunyuka kwe-vibration-reduction and refinements in the form of headster. Kwakhona, i-Titleist ithi umqambi we-putter ulungise ukubunjwa kwedwa ngokuguqula umgca we-balance point, uqikelele ubunzima be-shaft. Isiphumo, uKameron uthi, ngaba-putters abahlala kwisikwere kwidilesi.
Ngamanye amanqaku asixhenxe kwi-2018 iStyty Cameron Select line linePATS ye $ 399. Bona iwebhusayithi yeCameron ukuze uthole iinkcukacha ezongezelelweyo.
I-Cleveland TFi 2135 i-Putt Putters
Imodeli ye-1.0 yeCleveland ka-2017 i-TFi 2135 i-Satin ibeka. ECleveland iGolf
I-Cleveland yeGolf iye yahlaziya i-TFi 2135 ye-Satin yomgca we-Satter kunye neendlela ezinhlanu zeentloko. Iimodeli ezintsha ziquka ulungelelwaniso olutsha kunye nobuchwephesha bokulawula ukukhawuleza kunye nekhampani entsha yombala we-satin.
Imizekelo emihlanu ye-TFi 2135 ye-Satin putters ifumaneka ngaphambi komhla we-Agasti 28, 2017, kwaye iqalise ngokusemthethweni uSein 15, 2017.
I-tech-control tech ishilo iCleveland ibiza ngokuba "Ukukhawulezisa ukuKhutshwa kweMveliso," eyenzelwe ukuvelisa iifetts ezijikeleza umgama ofanayo kungakhathaliseki ukuba ibhola iqhagamshelana nobani bebhetter.
Lo mgca we-putter ufumana igama lakhe kwinto yokuba imigca yokulungelelaniswa iphakanyisiwe 21.35 amamitha-ukuphakama kwebhola yebhola yegolfu-phantsi komhlaba. Kwimimodeli emitsha, ezo mboniso ziphezulu.
Iifom ze-TFi 2135 ze-Satin zi-1.0, iRo, i-Elevado kunye neCero; Iimodeli ezinokulinganayo zi-8.0 ne-Elevado CB. Iintloko eziqhelekileyo kunye ne-pistosi ye-pistosi phakathi kwe-$ 149.99 IPHEPHA. Iintloko eziqhelekileyo kunye ne-oversized grips ziyi-159.99 i-MAP. Iimodeli ze-Counterbalanced zi-$ 179.99 i-MAP. clevelandgolf.com
IStyty Cameron Futura 5.5M
Yintoni ephawulekayo ye-Futura 5.5 ngo-Scotty Cameron? Umqambi we-putter we-putter uthi lo mfakeli udibanisa "ukuxolelwa kwe-mallet kunye nokuvakalelwa kwelungu." I-mallet ephezulu-MOI eyakhiwe ngokunyuka kweet toe.
"Ukuhamba kweetekisi" ligama elisetyenziselwa ukuba lukhulu kangakanani ubuso be-putter luvule kwaye luvale ngexesha lokubeka i-stroke. Ukufakwa kweetekisi ezihamba ngeetekisi ziyi-putters ezinamaqhezu amaninzi, kwaye iifakela ngezwane ezininzi zixhomekeke kakhulu kubadlali begalufu abasebenzisa i-arcing yokubeka i-stroke.
Kwaye ukugubha ukubetha ngokuqhelekileyo kunxulumene ne-layters-style style, kungekhona i-MOI mallet. Ngenxa yoko, i-Futura 5.5 ibizwa ngokuba yiCameron i-mallet kunye nevakalelo ze-blade.
I-Cameron Futura 5.5M iyafumaneka ngo-Agasti 25, 2017, eNyakatho Melika kunye ne-Septemba 22, 2017 ehlabathini lonke. I-MSRP yi-$ 410. Bona i-scottycameron.com ngolwazi olungaphezulu.
ICameron & Crown Putters nguScotty Cameron
Iisombululo zemizekelo emine evela kwiklayiti yeCenter's Cameron & Crown line. Inkampani yeAcushnet
Ingaba ungumntu okhuselekileyo, ngenxa yobukhulu bakho okanye ngenxa yokukhetha, ufuna i-putter emfutshane? Emva koko ii-putters zakamuva ezivela kwi-Titleist kunye no-Scotty Cameron zifanelekile
Iimodeko ezine kwi-Cameron & Family Crown zizonke ii-intshi ezingama-33 ubude. Iimodeko ezine zineentloko eziyilwe kwi-Futura kunye neefayile ze-Putter. Ezi zintloko zentloko ezine zikhetha i-Newport, Khetha i-Mallet 1, i-Futura 5MB ne-Futura 6M, zonke ezo zifanele zijwayelene nabalandeli beScotton Cameron.
Iintloko zixhomekeke ekusebenzeni ngokugqithiseleyo ngobude obufutshane, kwaye i-putters iza neyona ncinane encinci yeGrey Matri.
I-2017 iCameron & Crown i-putters iya kwiivenkile zegalufa e-United States ngo-Juni 16, 2017, kunye nehlabathi lonke ngoJulayi 21. I-MSRP yase-US i-$ 410, i-MAP $ 379. scottycameron.com
Harmonix Live Headers Putters
Kukho uninzi lwe-putters ekhangeleka ngaphandle, kwaye i-Harmonix ingaba enye yeyona ndlela ikhethileyo kunye nokubonakala kwayo kwefom. Kwaye i "fowuni" ithetha ixesha elithile elichazayo ngesinye isizathu: iitoni ezimnandi ezivela kwimpembelelo. Yiloo nto eyenza iHarmonix ifake igama labo.
I-Head Head Liveters by Harmonix yakha, inkampani ithi, zero backspin, ngoko ibhola ihamba phambili ngokukhawuleza. Oku kunceda ibhola ihambe ngqo apho i-golfer ijolise i-putter, inkampani ithi.
I-Harmonix i-Header Live Head ifaka kwakhona iintlobo ezininzi zeenkuni ekwakheni kwayo, akukho nto kwiqela legalufa kule mihla. Oko kufaka phakathi intsimbi, apho inkampani ichaza ngokuthi "ifudumala kwaye iyimvelo kwintsebenzo kunye neqhezu lesisindo seengqimba eziqhelekileyo."
Ngexesha lokubhalwa, i-putters ithengisa i-$ 399 kwi-website yeHarmonix.
3 I-Putters eNtsha kwiCleveland Huntington Beach Family
I-putter ye-HB3 ye-Cleveland. ECleveland iGolf
I-Cleveland iGulf igxile intsapho yayo entsha yaseHuntington Beach ifakeka ngasekupheleni kwe-2016, kodwa ngeemodeli ezintathu kuphela kumgca ngelo xesha. Ngoku, uCleveland ukhulula imifanekiso emithathu emitsha: i-HB3, HB6C kunye ne-HB10.
Zonke ziyi-milled, i-putters yensimbi engenakunqonqonqonqonqo yenzelwe ukunikela imivalo eqhubekayo kwimilo yeklasi. Ifomathi yokugaya idayimani kwi-clubfaces izihlandlo ezine ngaphaya kweemodeli zangaphambili zeCleveland.
Iifaki ezintathu ze-HB ezitsha zithengisa iimpahla ezithengiswayo ukususela ngo-Ephreli 14, 2017, kunye ne-MAP ye $ 99.99. Ziza ngobude be-33, 34 ne-35 intshi ezingama-Midsize Blue (okanye, ukukhutshwa kwe-$ 10, i-WinnPro X grip). clevelandgolf.com
I-Ping Camo Design PLD2
I-Ping ye-Cing Design PLD2. Ping Golf
Ngubani ofuna i-designer putter ephefumlelweyo? I-Ping Golf iye yawugubungela i-PLD2 ye-PLD2 e-limited-setters - i-Camo Ketsch Realtree Xtra kunye ne-Camo Ketsch Muddy Girl, zombini ukusuka kwi-Ping Putting Lab Design.
Iintloko ze-Ketsch ze-putter zixutywe nge-aluminium 6061; iingqimba zineensimbi zesilivere ezingenasici ezingama-17-4 ukuhambisa isikhulu sezinto eziphantsi komhlaba; iziqwenga ze-putters zinikela ngeempawu ezibonakalayo. Imifanekiso engaphezulu kwendlela yokwenza i-camo i-orange kwi-Realtree Xtra kunye ne-pink kwi-Girl Muddy.
I-325 ye-MSRP ibandakanya i-camo headcovers efanayo. ping.com.
Ukujonga phantsi kwe-shaft kwintloko kaShaftlign Putter. Shaftlign igalofu
Ngokungafani nazo zonke ezinye izigaba zegalufa yegalufa, kukho iindawo ezininzi zokwakha kunye nabaphuphi bezophupha kunye nokuthengisa iimveliso zabo kwiimakethe ze-putter.
I-Shaftlign putter ngumzekelo wamva nje wokuveliswa kwefatetick ekwakhiwe, eyakhiwe kwaye ithengiswa ngaphandle kwezenzi ezinkulu.
I-Shaftlign CJ1 putter ("CJ" yi-initials of designer, Clay Judice) yinto ekhangelekileyo yokujonga i-eye-toe blade putter intloko, kunye neyehlukile: indlela yokulungelelaniswa kwayo.
I-shaft ye-putter imhlophe. Phezulu kwentloko ye-putter, egijima isithende ukuya kwizwane, ibha yomhlophe efana nomlo ojikeleziweyo kunye nombala omhlophe we-shaft. Ukujonga phantsi kwi-putter kwindawo yokubamba idilesi, yintoni i-golfer ebona ibonakala iyinto enye emide, eqhubekayo, egciniweyo emhlophe.
Yindlela yokulungelelanisa enokunceda abadlali begalufu abazabalazela i- yips , okanye nawaphi na abagadi begolfu abazabalazela ukubeka isikwere, ukuphucula ukubeka kwabo. Kwiwebsite yenkampani (shaftlign.com), i-putters zidweliswe kwi-$ 200.